Ciidamada NISA oo gacanta ku dhigay mid ka mida Dadkii soo maleegay Weerarkii Hotel Saxafi - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Ciidamada NISA oo gacanta ku dhigay mid ka mida Dadkii soo maleegay Weerarkii Hotel Saxafi
Qof ka mida dadkii soo maleegay weerarkii Hotel Saxafi oo la qabtay
Weerarkii Hotel Saxafi 9 Novembar waxaa ku dhintay 52 qof iyo Dhaawac 106
Hay’adda Nabad sugidda iyo Sirdoonka Soomaaliya ee NISA ayaa shaacisay inay gacanta ku dhigtay mid ka mida dadkii soo maleegay weerarkii Hotel Saxafi ee magaalada Muqdisho ee 9-kii Novembar 2018.
“Howlgal xirfadeysan oo si taxadar leh loo fuliyay, ayaa ciidanka amnigu kusoo qabtay mid kamid ah maskaxdii maleegtay weerarkii lagu qaaday Hotel Saxafi 9-kii Nofembar. Waxaana la horgayn doonaa sharciga.” ayaa lagu yiri qoraalka NISA .
Weerarka Alshabaab sheegatay ee lagu qaaday hotel Saxafi ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 52 qof, iyadoo ay ku dhaawacmeen 106 kale, waxaana hotelka lagu weerarray saddex gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Guddoonka Baarlamaanka Federaalka oo kala diray Guddigii Maaliyadda ee kala qeybsamay (Akhriso Qoraal)
Dagaal u dhaxeeyay Daacish iyo shabab oo ka billowday Puntland